[Lanxiang Pavilion] Ukubuka okuphansi kwendlu ye-mahogany esezingeni eliphezulu/isifunda sezentengiselwano esivuthiwe/indawo yokupaka ekhethekile/ukubulala amagciwane nge-ultraviolet e-Dongxing City Trade Zone - I-Airbnb
[Lanxiang Pavilion] Ukubuka okuphansi kwendlu ye-mahogany esezingeni eliphezulu/isifunda sezentengiselwano esivuthiwe/indawo yokupaka ekhethekile/ukubulala amagciwane nge-ultraviolet e-Dongxing City Trade Zone
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-瑜
Iphunga lembali yonke indlela, ingoma yonke indlela. Uma ujika usuka ku-ASEAN Avenue obanzi, uzothola kalula i-Lanxiang Pavilion, indlu ethokomele eyakhelwe wena ngokukhethekile emngceleni we-Sino-Vietnamese e-Dongxing.
Lesi sakhiwo siyindawo yokuqala yokuqashwa kwendlu entsha, enombono osezingeni eliphezulu wegumbi le-elevator negesi yemvelo. I-mahogany enamagumbi okulala amathathu anendawo engamamitha-skwele ayi-137, amagumbi okulala ama-3 anamafasitela e-bay kanye nomata be-tatami. Amasofa e-Mahogany, amakhabethe ezicathulo ze-mahogany, amatafula okudlela ama-mahogany nezihlalo, imibhede ye-mahogany ... Iphunga elimnandi le-mahogany liyisikhala esikhulu sokuthi wena nomndeni wakho nabangani bakho nibuyele emvelweni futhi nihlanganyele izikhathi ezimnandi. Ama-air conditioner angu-4 angahlinzeka ngokuhlinzekwa okubandayo nokufudumele. Igumbi lokuhlala kanye negumbi lokulala line-WIFI ezimele kabili, izinto zasendlini ezinegama lomkhiqizo, ezifakwe i-TV yenethiwekhi ehlakaniphile. Ngaphezu kwezindawo zokupaka ezikhethekile esitezi sokuqala, kunezindawo eziningi zokupaka ezihleliwe ezizungeze umphakathi, ezizokhulula ukukhathazeka kwakho ngokuhamba ngezimoto ezimbalwa.
Ungafaka isicelo sama-visa ohambo losuku olulodwa oluya e-Vietnam, futhi unikeze ngezinsizakalo ezibanzi nezisezingeni eliphezulu zeholide lakho.
Ukuqoqa ukudla okumnandi, izinto zokuhamba ezikahle, nokuthula ekuchumeni.
Ingaphambili lomphakathi nguDaping Road, kanti ngemuva kukhona i-ASEAN Avenue, lapho kuhlangana khona ukudla okumnandi. Izibiliboco zosaziwayo be-inthanethi njengokuthi "Gao Lao Seafood Congee", "Shafa Hong Kong Beverage Hong Kong Food", "Hua Jie Chicken Noodles", "Yizhong Tangshui", kanye "ne-Macao Dou Lao" konke kuzungeze umphakathi. Kukhona i-Xinrunfa Supermarket kanye ne-Chengxi Vegetable Market eduze, lapho izithako ezintsha zitholakala kalula.